Top 3 European Railways Ije Ozi Good Food | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 3 European Railways Ije Ozi Good Food
(Emelitere ikpeazụ On: 24/12/2020)
Ị nwere ike nụrụ ya gburugburu, mana ikwenyeghi ya.
Okwu nke na-atọ ụtọ ụgbọ okporo nri, na-adịghị nnọọ n'ebe dị anya site na eziokwu - ị pụrụ n'ezie ịnụ ụtọ ọ bụla otu aru nke gị ụgbọ okporo nri! Boys na ụmụ agbọghọ na, ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ezigbo nri na-adịghị a ifuru - ha ezigbo, na na anyị banyere na-agwa gị otú ezigbo (na ebe-ahụ na ya).
Echefu ụgbọelu nri n'ihi na mgbe ị na-agbalị na-efere nke ndị a 3 European ụlọ oriri na ọ trainụ trainụ ụgbọ oloko, ị ga-amarakwa ezi pụtara ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ezigbo nri. ma ọ bụ, mma ma - na-atọ ụtọ nri.
1st bulie maka Railways na-eje ozi ezigbo nri – German ụgbọ okporo ígwè
Kwere ya ma obughi Deutsche Bahn’s ICE ụgbọ oloko na-eje ozi ugbu a na menu kachasị dị iche iche na Europe. Njem na ndị a na ụgbọ oloko na-na-enweta mastery nke Horst Lichter, a celebrity siri nri, eweta, na onye edemede akwukwo nri onye onye oru ya na Deutsche Bahn kewara 2014. Dị ka akụkụ nke mgbasa ozi ya otu afọ, Lichter ẹkenam 12 ọhụrụ Ntụziaka echiche gafee karịa 250 isi nri ọrụ. Mkpọsa a na-akpọ 'Ire na-achọpụta na Germany,'Ọ bụ ihe niile ị chọrọ ná ndụ gị ugbu a. Ọzọ oké ihe banyere mkpọsa a bụ ya ndị ọzọ na-akpata. Ya bụ, cent iri ọ bụla na-eje ozi nri laa maka nchebe na ichebe German ọhịa mpaghara! Gịnị a oké ụzọ ka jikota fundraising na nri ụtọ, nri?
Ekwu okwu nke fabulous nri, na bụghị ihe niile. Afọ gara aga, Deutsche Bahn nyere ohere 7 nri blọgụ na-ewetara ha nri nke oke na onboard menu. Ọzọkwa, ọ bụla ọnwa abụọ n'etiti April 2017 na March 2018, oke a na-emelitere na ihe niile si vegan na anaghị eri anụ efere na n'oge a kara ndị. n'ijuanya? anyị bụ ndị na, oke! Railways na-eje ozi ezigbo nri maa-amalite na German ụgbọ okporo ígwè.
Frankfurt na Hamburg Train tiketi
Brussels na tiketi Hamburg Train
Tiketi Vienna na Hamburg Train tiketi
Cologne na tiketi Hamburg
2nd bulie maka Railways na-eje ozi ezigbo nri – Eurostar
Eurostar si Business Premier njem n'aka na-enwe a ise kpakpando ọgwụgwọ n'ụzọ ọ bụla. Nke a cross-ókè-ala ọrụ na-emepụta n'oge a kara menus na mmekota na onye ọzọ karịa culinary director Raymond Blanc! The nchoputa nke Brasserie Blanc, ma, na onye siri nri chi nke abụọ Michelin-starred ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Blanc na-eme ka n'aka nri karịrị tụnyere. Ihe niile bụ organic na ndụ si ọrụ ugbo. Plus, niile nri bụ free si genetically gbanwetụrụ ngwaahịa na ikpokọta British na French esi nri. Blanc collaborates na onye ọ bụla nke Eurostar si 3 esi chepụta-agaghị echefu echefu nri.
Eurostar na-edebe ruo na nri ọnọdụ, mere ihe niile bụ gluten na mmiri ara ehi-free ma ọ bụrụ na ndị njem ka iji. Otu na-aga n'ihi na vegan na anaghị eri anụ efere, kwa na nke a bụ nanị otu n'ime anyị ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ezigbo nri na a ọwara!
IHE: The naanị dịruru ná njọ ebe obsessively ewere a foto gị nri na-anara bụ na a ụgbọ okporo ígwè. Ị na-na na na- mee ka gị na Instagram na-enwu na Blanc si Ezi ntụziaka!
The ikpeazụ na anyị ndepụta bụ – Great Western Railway
Onye ọ bụla, aga – n'ihi na Great Western Railway (GWR) bụ ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ezigbo nri! GWR isi partnered na onye siri nri na restaurateur Mitch Tonks chepụta fabulously tọrọ ụtọ menus maka ya London - Penzance njem. Nri ha na-eji bụ mpaghara-ndụ, na ọkachamara chefs na-akwadebe ya on board. ma, akụkọ anaghị akwụsị e. Afọ gara aga, GWR mepere ụgbọ ala nri Pullman ya, ma ọ bụ dịka ha chọrọ ịkpọ ya "otu n'ime ihe nzuzo nzuzo Britain kacha echebe." Gbọ ala ahụ nwere menu ọhụrụ ọhụụ na-enye ya na ụgwọ ndị ọzọ niile. Ka GWR nnọchiteanya ịkọwa, "Ndị Pullman ụgbọ ala na-ekwe nkwa na-gị azụ ka ụbọchị nke dara oké ọnụ ụgbọ okporo ígwè njem; na plush oche, ákwà tebụl na-acha ọcha, na ọrụ ọlaọcha sitere n'aka ndị otu anyị nwere ọyị. ”
Onye ọ bụla kwesịrị ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ezigbo nri na ugbu a na ị maara nke azụ ka akwụkwọ, ihe niile dị mfe. Họrọ Save A Train maka a ụgbọ okporo ígwè tiketi na-amalite na-ekpori gị ezigbo nri ndụ taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-railways-serving-good-food%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#Ebe a na-eri nri #njem nri deutschebahn eurostar ọhaneze traveltips